Kutengeserana kwezwi nemhedzisiro yaro yekutengesa pamhepo | ECommerce nhau
Kutengesa kwezwi nemhedzisiro yaro yekutengesa pamhepo
Icho Commerce yezwi chinomiririra pamhepo yekutengesa chakanyanya kupfuura zvaunogona kufungidzira kubva pakutanga. Hazvishamise kuti inzira yekutengesa yezwi inotarisa pakutengesa kuburikidza nezviwanikwa zvekushandisa kwenzwi zvinopihwa nharembozha. Uye kubva kwatingave nemikana mizhinji yebhizinesi mukutengeserana kwedigital.
Kune rimwe divi, zvinofanirwawo kutarisirwa kuti Izwi rekutengeserana kana izwi rekutengeserana ndeimwe yemikana iyo mushandisi anotsvaga izwi, kungave parunhare kana nemubatsiri chaiwo, kuitira kuti utenge pamhepo. . Kuve unovandudzika kwazvo modhi uye kuti neimwe nzira iri kuzochinja online yekutengesa kubva ikozvino.
Kana kuti iwe unzwisise zvishoma zvirinani kubva zvino zvichienda mberi. Inoita zano remazuvano rinokushandira, kuitira kuti kuburikidza neiri rakakosha izwi system, iwe uve nemukana wekuonana nezvazviri chaizvo. kuwanikwa kwezviitiko zvekutengesa inozivikanwa nekushandisa izwi rinofanira kuitwa. Sezvauchaona, mutsauko wakakura zvine chekuita nemamwe mamodheru ane hunhu hwakafanana. Asi kubva ikozvino tichakudzidzisa zvishoma zvirinani kuti iwe uzive zvazvinoumbwa uye nemabatiro aungaite kuita kuri nani mukushandisa kwayo mubhizinesi rako kana muchitoro chepamhepo. Hazvishamisi kuti, nerombo rakanaka pane nzira dzakawanda dzekuita zvimwe kutengesa online, mazhinji acho anogona kuitwa neimwe nzira kana imwe, sezvo iwe uchizokwanisa kuona kubva panguva ino zvichienda mberi.
1 Chii chinonzi izwi kutengeserana kana izwi kutengeserana?
2 Kutengesa izwi kunoshanda sei?
3 Ndeapi mabhenefiti ekutengesa kwezwi?
4 Ndeapi matambudziko ezvekutengesa izwi nhasi?
5 Ko iro ramangwana rekutengeserana kwezwi rinotaridzika sei?
6 Unoshandisa sei kutengeserana kwezwi?
7 Zvimwe zvikumbiro mukutengesa kwezwi
Chii chinonzi izwi kutengeserana kana izwi kutengeserana?
Voice commerce inoshandisa izwi rekuziva tekinoroji kudzikisira vashandisi vekupedzisira 'kutsamira pane Hardware (senge mbeva uye keyboard), ichivabvumidza kushandisa izwi rairo kuti vawane nekutenga zvigadzirwa pamhepo. Kuti ushandise kushambadzira kwezwi, zvese izvo zvinodiwa izwi-rine simba mudziyo uye mubatsiri wezwi.
Asi kutengeswa kwezwi kwakauya riini? Huye, tekinoroji yekucherechedza kutaura yakadzokera ku1961, apo injinjini yeBMM William C. Dersch akagadzira yekutanga kutaurwa kwekuziva system munhoroondo, inonzi "Shoebox." Yaiziva mazwi gumi nematanhatu ataurwa, asi panguva iyoyo, yaingoshandiswa kuverenga matambudziko esvomhu. Nekudaro, iri raive danho rekutanga kupinda munyika yehunyanzvi hwekutaura Muna 16, mutevedzeri wezwi, Siri, akaitwa kuti awanikwe kune iPhones, uye muna 2011, Android yakatanga yavo mubatsiri wezwi.
Nekudaro, kunyange hazvo tekinoroji yezwi nevabatsiri vezwi vasiri zvigadzirwa zvitsva, kugamuchirwa kwezwi kutengeserana kuchiri kutsva. Vatengi vari kungotanga kushandisa izwi kuraira kutsvaga uye kutenga pamhepo, nevamwe vachiri kuzeza sezvavanomirira kuyedza mvura yemaoko-emahara nzira ye e-commerce.
Mumakore mashanu apfuura, pakave nekukwira kwakakura mumidziyo yezwi seAmazon Echo neGoogle Imba, zvichitungamira mukukwikwidza kwakafanana muvatengi vari kutsvaga kuyedza kutengeserana kwezwi. Sezvo mamwe manzwi enzwi achioneka pamusika, maitiro aya angangoenderera nekuunganidza simba.
Kutengesa izwi kunoshanda sei?
Kutengesa kwezwi kunoitirwa kuve, uye kuri, kutwasuka kuita. Kubva pamaonero evatengi, zvese zvaunoda izwi rako. Ipapo iwe unoda tekinoroji kuti zviitike. Hezvino zvinhu zvina zvinodiwa izvo zvakakosha pakushandisa kwayo chaiko
Unoda mudziyo une izwi mubatsiri; Iyi inogona kuve smartphone kana akafanana manzwi-akavhurwa maturusi (seAmazon Echo kana Google Imba).
Iwe unofanirwa kutaura rairo yekumutsa chishandiso, se "Hei Siri."
Iwe unofanirwa kushandisa rinotanga izwi (kazhinji chiito kana chiito). Semuenzaniso, kana iwe ukati kuraira, "Siri, odha chigadzirwa XYZ," "odha" raizove iro rakakosha.
Iwe unofanirwa kuziva matoni ako uye inflections, sezvo chishandiso chako chichaona izvo zvawakatora uye chizoziva kuti iri rako rakasarudzika izwi uye richaedza kudzivirira kuisa rairo kune izvo zvinofungidzirwa kuti izwi "risingazivikanwe".
Ndeapi mabhenefiti ekutengesa kwezwi?
Zvishandiso zvine simba-izwi zvinoshandiswa pazvinangwa zvakasiyana, sekuteerera mimhanzi, kutarisa tembiricha, kutsvaga ruzivo online, uye kuita zviitiko zvezuva nezuva sekuhodha chikafu nekutenga online. Nekuti zvekutengeserana mukana wakakura kudaro wezwi tekinoroji, makambani mazhinji akatotora mukana wezwi kutengeserana kusimudzira ruzivo rwevatengi online. Iwo mabhenefiti makuru ndeaya:
Kubatsira kukuru kwekutengesa izwi ndekwekuti zviri nyore sei kushandisa. Zvese zvaunoda kuti uzviise icho chigoni chine mubatsiri wezwi uye rako rako izwi. Iyo inobvumidza vatengi kutenga kana ivo vari kubika, kuita zvakawanda, kana kunyange kutyaira. Kutenga zvigadzirwa pamhepo hazvina kumbobvira zvave nyore nekutengesa kwemaoko-maoko.
Kuwanikwa chero nguva yezuva
Vatengi vanogona kutenga vachishandisa izwi commerce 24/7, sezvavaizoita mune chero chitoro pawebhu, asi izwi tekinoroji rinovatendera kuti vadaro nekukurumidza uye nekukurumidza, pasina nzira yakareba. Kufamba uye kutenga.
Nezwi rekutengeserana, mutengi haafanire kupinda mukati kana kuzadza zvaanoziva kuchitoro chewebhu chekambani kuti atenge chigadzirwa online - nguva yakakosha inochengetwa uye kurerutswa kunowedzerwa.
Kusarudzika yezviitiko zvekutenga
Nekuti kutengeserana kwezwi kuri nyore kushandisa, vanhu vanowanzo batana zvakanyanya nemidziyo yavo. Midziyo inogona kuunganidza yakawanda data kubva kune varidzi vayo, uye shandisa iyi data kuita kwavo kwevatengi ruzivo. Makambani anounganidza ruzivo nezve maitiro evatengi, zvavanofarira, uye nhoroondo dhata vanogona kugadzira zvigadzirwa zvine simba uye nzira dzekushambadzira kuti vakunde makwikwi, vachifadza vatengi vavo nekutenga kwese.
Ndeapi matambudziko ezvekutengesa izwi nhasi?
Izwi rega rega remunhu rakasarudzika, uye makomputa anogona kuva nenguva yakaoma yekunzwisisa maacnc uye zvirevo.
Vagadziri vanofanirwa kuramba vachivandudza maficha emutauro kuti vakunde dambudziko iri. Chirungu ndiwo mutauro wakasimukira uye unozivikanwa muhunyanzvi hwekureva izwi nhasi, asi Amazon yatanga kutengesa zvishandiso zveEcho kune nyika dzinopfuura makumi masere, saka kusimudzira mutauro kunofanirwa kuvandudzwa kuti kuenderane nezvazvino.
Ita kudyidzana kuve "munhu"
Pamusoro pezvipingaidzo zvemitauro, zvirongwa zvezwi zvakare zvinonetseka kuita kudyidzana nevabatsiri vezwi vanzwe zvakanyanya kunzwisisa uye zvakasikwa, senge izvo zviri pakati pevanhu vaviri. Kugadzirisa dambudziko iri kunogona kukanganisa kuvimba kwevatengi muhunyanzvi tekinoroji uye kutyaira kushandiswa kukuru kutenderera pasirese.
Iko kushomeka kweruzivo nezve kugona kwevabatsiri vezwi, uye vatengi vazhinji havatenge kana kushandisa vabatsiri vezwi nekuti vanonzwa kuti vane ruzivo rushoma kana vasina ruzivo rwezvingaitwe nemubatsiri wezwi, mashandisiro aro, kana kana paine njodzi kubatanidzwa. on
Ko iro ramangwana rekutengeserana kwezwi rinotaridzika sei?
Kutengesa kwezwi kune mukana wekuchinja mutambo weB2C uye B2B e-commerce, kana zvipingamupinyi zvekutora zvikundwa. Sekureva kweGoogle, makumi maviri muzana% yekutsvaga kwese kwakaitwa kuburikidza nemirairo yezwi. Parizvino, izwi rekushandisa tekinoroji mushandisi muUS chete inomiririra 20% yevagari. Econsultancy inofungidzira kuti ne42,7, izwi rekutengeserana rinoverengera hafu yezvose zvatsvaga pamhepo. Zvinototarisirwa kuve chikamu chezviitiko zvekutenga nezvidhinha, zvichibvumira vanhu kuti vatsvage zvinhu online uye muzvitoro, nenzira imwecheteyo yavaizosangana nemunyori wemuchitoro.
Mukana wemakambani eB2B
Kune makambani eB2B, kutengeserana kwezwi mukana wakanaka kwete chete wekuvandudza maitiro mumatura nemahofisi, asiwo kusimuka kubva pamakwikwi. Makambani eB2B ari kupayona kutora matekinoroji matsva senge izwi rekutengeserana anokwanisa kupa vatengi vavo veB2B zvisingakanganwike, zvakapusa uye zvine hungwaru zviitiko zvepamhepo.
Nepo tekinoroji yezwi ichichinja, iri kukanganisa mune dzakawanda nzvimbo, kusanganisira e-commerce. Muchikamu chino, tichazonyatso tarisa kuti kutsvagisa izwi kuri kuchinja sei kutenga pamhepo, chii izwi rekutengeserana, uye nei riine mukana wekuve chinhu chikuru chinotevera mue-commerce. Vachaona kuti tekinoroji yekucherechedza kutaura iri kutochinja nzira yatinotenga nayo online.
Kutengesa kwezwi tekinoroji inopa imwe nzira yekushandisa iyo keyboard uye mbeva kurongedza nekutenga zvigadzirwa online. Wese mutengi anoda kutsvaga nekutenga chimwe chinhu pamhepo achishandisa mirairo yezwi mubatsiri chaiye seGoogle Mubatsiri kana Amazon Alexa - uye, chokwadika, izwi. Kutengesa kwezwi hakuna kuganhurirwa mukutsvaga icho chigadzirwa pachacho, asi zvakare kuodha nekuchitenga.
Nerubatsiro rwekutengesa izwi, kupedzisa kutenga kunova nekukurumidza uye kunogona kuitwa chero nguva yezuva, kunyangwe uchigeza, kana mubatsiri wako achigona kuzvinzwa. Zvinoenderana nezwi rekutenga mutengi kugamuchirwa mushumo, zvikonzero zvepamusoro vatengi senge izwi rekutenga ndere:
Izvo zvinokwanisika kuzviita iwe uchiita zvimwe zvinhu
Inokurumidza kuwana mhinduro uye mhedzisiro.
Kana iwe uri mutengesi uye usinga gadzirire ino yakakosha e-commerce maitiro kune v-commerce, saka hauzove uripo.
Unoshandisa sei kutengeserana kwezwi?
Kuti vatenge online vachishandisa tekinoroji yezwi, vatengi vanoda nharembozha kana mutauri akangwara uye mubatsiri chaiwo. Mhando dzinozivikanwa dzevatauri vakangwara vanoshandisa vabatsiri vezwi-vanodzorwa vari Amazon Echo (inofambiswa ne Alexa) neGoogle Imba (inofambiswa neGoogle Mubatsiri).
Inzwi-rakamisikidzwa smart vabatsiri anoshandiswa zvakasiyana siyana zvinangwa: kuteerera kune chero mhando yemumhanzi, kutsvaga rumwe ruzivo pane chero nhaurwa, kumhanyisa imba otomatiki basa, uye kunyange kuodha chikafu. Ngatitarisei nezvekuti vabatsiri vechokwadi vanoshandiswa sei kushambadzira izwi pamhepo.
Panyaya yeAmazon, vatengi vanogona kushandisa chinogoneswa neAki-Alexa kutsvaga, kurodha, uye kutenga zvigadzirwa zveAmazon vachishandisa izwi ravo. Izwi rekuti "Alexa" rinoshandisa mudziyo. Semuenzaniso, mutengi angati "Alexa, odha" uye zita rekuti chigadzirwa chavanoda kutenga. Alexa inotarisa nhoroondo yemutengi yakachengetwa uye inoratidza zvigadzirwa zvichibva pane yapfuura data. Kana iyo yapfuura data isingaratidze zvakapfuura maodha senge yazvino iyi, saka Alexa inoratidza "Amazon Sarudzo" zvigadzirwa kutanga. Alexa inozivisa mutengo wechigadzirwa uye inobvunza kana mutengi achida kutenga chigadzirwa. Kana hongu, Alexa inoisa odhiyo; kana mhinduro iri kwete, Alexa inogona kuratidza dzimwe sarudzo.
Zvimwe zvikumbiro mukutengesa kwezwi
Huchenjeri hwekugadzira hune simba rekushandura chero chinhu chiri kure kupusa kuita chinhu chakangwara! Ehe, AI yanga ichiita izvi kwenguva yakati rebei uye nekukwira kwevabatsiri vezwi, zvinhu zvawedzera kunakidza. Makambani kutenderera pasirese akanzwisisa kukosha kwe "Voice Commerce."
Izvo zvese zvakatanga neyekutaura-kune-tekinoroji tekinoroji yakagadzirwa neGoogle. "Google Voice Search" yaburitswa iPhones, iyi yepamusorosoro application yakashandisa nzvimbo dzedata kuverenga nyore data uye kugona kuiongorora, uyu muenzaniso wakanaka wekutaura kwevanhu.
Vabatsiri vezwi izwi rakafara uye rinoreva kune vamiririri vehurukuro vanoita mabasa akasiyana emunhu kana mushandisi, angave anoshanda kana ehukama mune zvakasikwa, vachidudzira rairo yezwi uye mamiriro echikumbiro. Iyo software hwaro hwezvinhu zvakangwara zvakadaro zvine musanganiswa weAI matekinoroji seAutomatic Speech Recognition (ASR), Text-to-Speech Synthesis (TTS), Natural Mutauro Kunzwisisa (NLU), kuti uite munzvimbo yepanyama. vashandisi.
Ichi chikamu cheInternet yezvinhu (IoT) zvishandiso zvinozivikanwa nemazita akasiyana siyana anosanganisira: smart mutauri, AI mubatsiri, akangwara wega mubatsiri, wedhijitari wega mubatsiri, izwi-rinodzorwa nenjere mubatsiri, izwi-rakagadziriswa smart mubatsiri) uye nhaurirano mumiriri. Zvese izvi zvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya mumusika uye izvozvi zviri kushandiswa kuita kuti vatengi vatenge zvigadzirwa zvinokurudzirwa pamapuratifomu avo.
Rubatsiro kune vatengi:
Sekureva kweimwe ongororo ichangobva kuitwa, vanopfuura 3.250 mabhiriyoni edhijitari anobatsira izwi anoshandiswa munyika ino yedhijitari uye zvinofungidzirwa kuti panosvika gore ra2023 ichasvika zvikamu zvisere bhiriyoni, inova inopfuura huwandu hwevanhu vePasi panguva ino. . Kana iwe ukafunga iwo manhamba eUnited States chete, kune vangangoita 8.000 mamirioni evashandisi veadhijitari izwi vabatsiri ane avhareji yekushandisa kamwe pamwedzi.
Vabatsiri vezwi vanogona kutora mafomu akasiyana siyana, senge pane mbozhanhare kana mutauri weBluetooth senge "Alexa" kana yakamisikidzwa software vamiririri vakaita se "Cortana" kana "Catalina" pamafoni efoni nemakomputa.
Anonyanya kufarirwa mazwi emubatsiri ezwi anowanikwa nevashandisi ari kutamba mimhanzi, kudzora zvishandiso zvemagetsi, kupa ruzivo rwemamiriro ekunze, kupindura mibvunzo yeruzivo yakawanda, nekumisikidza maalarm.
Asi, pamwe nekufambira mberi kwazvino muhungwaru hwekunyepedzera uye matekinoroji ekudzidza emuchina, kushandiswa kwevabatsiri vezwi rekushandisa bhizinesi kwakawedzera. Nhasi, vabatsiri veadhijitari vanoonekwa senzvimbo nyowani yekubatana iyo inogonesa mafomu matsva ekudyidzana pakati pevatengi nemhando.
Kutengesa kwezwi kuri kubatsira vashandisi vayo kurodha pamhepo vachishandisa vabatsiri vezwi. Huwandu hwevatengi vanoshandisa smart maspika kune kwavo kutenga kuri kuwedzera nekukurumidza, uye huwandu hwevatengi vanoshandisa chaiwo vabatsiri hauna kuganhurirwa kune chimwe chigadzirwa chigadzirwa, asi chinosiyana pamhando dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa. Statistically, vangangoita 21% yeUS smart speaker varidzi vakatenga mimhanzi kana mafirimu uye 8% vakatenga zvinhu zvemumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Kutengesa kwezwi nemhedzisiro yaro yekutengesa pamhepo
Social Commerce inoitika muecommerce mu2020
Maitiro mukutengesa kwepamhepo